Isikhulu samaphoyisa kwelokusoconga | IOL Isolezwe
Isikhulu samaphoyisa kwelokusoconga
Isolezwe / 30 August 2012, 12:46pm / BAWINILE NGCOBO
Vishnu Naidoo. Isithombe: Shayne Robinson
KUBOSHWE usigaxamabhade wasesiteshini samaphoyisa ePomeroy ngamacala okwakha itulo lokusoconga uzakwabo nomshushisi kwelinye lamacala okubulala elalivulwe kulesi siteshi.
Leli phoyisa elineminyaka engu-57, elinguKaputeni elibuye liphathe isiteshi uma umasteshi wasePomeroy engekho, liboshwe ngamaphoyisa ophiko lwamaHawks, aseMgungundlovu, ngoMsombuluko.
Okhulumela amaphoyisa kuzwelonke, uColonel Vishnu Naidoo (osesithombeni), uthe leli phoyisa liboshelwe ukwakha itulo lokubulala uzakwabo owayephenya icala lokubulala elalithinta abantu elalizwana nalo nomshushisi waleli cala.
Leli tulo wayelakha nabanye abasolwa ababili okuthiwa kwakuyibo ababezoba yizinkabi.
UNaidoo uthe bashaqekile ukuthi leli phoyisa osekusele iminyaka emincane lithathe umhlalaphansi, libandakanyeka ecaleni elinje.
“Ukuboshwa kwakhe kuyakhombisa ukuthi amaphoyisa ngeke akubekezelele ukuthi kube khona abantu ngaphakathi abazibandakanya nobugebengu ikakhulukazi njengoba leli phoyisa liboshelwe itulo lokusoconga uzakwabo nomshushisi okungumuntu esisebenzisana naye kakhulu ukwenza isiqiniseko sokuthi abantu abenza ubugebengu bavalelwa ejele,” kusho uNaidoo.
Ngokuthola kweSolezwe leli phoyisa belihlangene nabalisa bandawonye bakule ndawo abagwetshwe odilikajele ngoJuni nonyaka ngecala lokubulala uyise wabo omncane.
Kuthiwa ukwakha leli tulo lokubulala umphenyi wecala nomshushisi kuqale ngesikhathi laba balisa benqatshelwa ibheyili ecaleni lokubulala abebebhekene nalo, sekuvela nokuthi umphenyi wecala wayengowokuqala ohlwini lababezofakaza kuleli cala.
Laba basolwa kuthiwa batholakala ukuthi kunamaselula ababewasebenzisa bengaphakathi ezitokisini okwakungaziwa ukuthi babewathole kanjani nokuyiwo ababexhumana ngawo nabantu abangaphandle ababezosoconga umphenyi nomshushisi.
Kuthiwa leli phoyisa lizwana kakhulu nomndeni walaba abagwetshelwe ukubulala uyise omncane wabo kanti kwakunenkolelo yokuthi uma kungase kusocongwe umphenyi wecala nomshushisi babengase bakhishwe.
Lizovela namuhla enkantolo.